Sawiro: Itoobiya oo Somaliland dhismo Safaaradeed ka siisay Addis-Ababa
Home Somali News Sawiro: Itoobiya oo Somaliland dhismo Safaaradeed ka siisay Addis-Ababa
Itoobiya ayaa ugu dambeyn dhismo ay degto siisay Safaaradda Somaliland ee Addis Ababa, taasoo ah calaamad muujineysaaqoonsi. maadaama Somaliland ay horay iskeed ugu dhawaaqday inay tahay dal ka madax banaan Soomaaliya.
Tallaabadan ayaa ka dambeysay markii Itoobiya saami dhan 19% laga siiyay Dekeda Berbera oo lagu wareejiyay Shirkad laga leeyahay dalka isu tagga Imaaraadka Carabta oo lagu magacaabo DP World.
Somaliland ayaa sheegtay in shirkadda DP World ay saamigeeda 65% ay ka siisay Itoobiya 19%, taasna ay xaq u leedahay, maadaama Itoobiya ay wax kala soo degto Dekeda Berbera.
Somaliland waxay horay wakiil ugu magacawday Itoobiya, kaasoo degenaa dhisme Ijaar ahaa, balse tallaabada ay Itoobiya ku siisay dhismaha cusub waxay noqon kartaa mid xadgudub ku ah qaranimada Soomaaliya.
Dhismaha cusub ee dowladda Itoobiya siisay Safaaradda Somaliland ee Addis Ababa ayaa ku yaalla Xaafada Bole, waxaa baraha bulshada la soo dhigay sawirka dhismaha iyo boor ku qoran afka English-ka”The Republic of SomalilandPermanent Diplomatic Mission Addis Ababa”, balse dhismaha kama taagnaa wax calan ah.
Itoobiya ayaa horay cilaaqaad iyo xiriir dhow ula laheyd Maamulada dalka ka jira, iyadoo taas dad badan ku tilmaameen mid fara gelin ku ah madax banaanida Soomaaliya.
Hase ahaatee tallaabada ay Itoobiya ku siisay dhisme safaaradeed maamulka Somaliland, waxaa uu ka hor imaanayaa, hadalkii Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Hailemariam Desalegn uu ka sheegay safarkii uu Madaxweyne Farmaajo horaantii bishan ku tagay Addis Ababa, kaasoo ahaa in aysan fara gelineyn madax banaanida iyo qaranimada Soomaaliya.